Ndị na-agba ịnyịnya ígwè bụ ezigbo mmega ahụ? - Azịza Kacha Mma
Isi > Azịza Kacha Mma > Na-agba ịnyịnya rollers - otu esi enweta ya
Na-agba ịnyịnya rollers - otu esi enweta ya
Ndị na-agba ịnyịnya ígwè bụ ezigbo mmega ahụ?
Echi Trainiacs. Na-agba mbọ ugbu a. Kama ịbụ onye na-anya ụgbọala, onye na-azụ Wahoo KICKR m na-ejikarị, anyị nọ, whoa, ndị ama ama ama ama ama ama Nero na-arụkọ ọrụ na Zwift.
Ọ bụrụ n’ịnọ n’ahịa maka onye na-enye ọzụzụ na ị maghị ihe ị ga-enweta mgbe ị na-eche ọrụ ma ọ bụ onye na-enye ọzụzụ, anyị ga-ekwu maka esemokwu dị iche iche na ahụmịhe m na Elite Nero. Adara m otutu karia ka i mere. M hụrụ ya.
Ọtụtụ ihe. Woo-ee. (Upbeat music) Ọ dị mma, Trainiacs, ugbu a enwetala m narị ndị nkuzi a bara uru n'ọtụtụ ebe, ka anyị kwuo maka ndị na - azụ ọzụzụ na ọrụ.
Na uche m, e nwere ihe dị ka nnukwu ihe ise dị mkpa iji tụlee mgbe ị na-eme mkpebi ịzụta n'etiti ọrụ na onye na-azụkarị ọdịnala. Ugbu a, otu, ọrụ ga-eme obere ihe mmụta. Yabụ oge mbụ m na rollers, ọ bụghị kpọmkwem ihe m tụrụ anya ya.
Ọ naghị esiri ike mmụta, ihe dị mkpa bụ na ịchọghị ilelị anya ma ọlị, naanị ị chọrọ ịdị na-aga n'ihu mgbe ị na-ebugharị. Obere ihe siri ike ịgbanwe dị ka, akụkụ na ihe ndị dị na Zwiftor na-eji otu aka ejide karama mmiri. Nwalee ya ugbu a, mana ị hụrụ na enweghị m ikike, woo-hoo, lee onwe gị anya ma ọlị.
Dịka ọmụmaatụ, ị ga-arụ ọrụ maka ya oge niile. Eleghị m anya ejiri m ihe dị ka elekere atọ ugbu a. Nke mbụ 10, 20 nkeji bụ ọdachi zuru oke, mana mgbe awa atọ gachara, enwere m nkasi obi karịa na anaghị m eche banyere ya nke ukwuu.
Thezọ si na tụlee gaa na akụ akụ ka na-adịchaghị mma, mana ị nwere ike ị nweta isi na ọ bụ otu ihe ahụ dị ka ịnya n'èzí. Dr. Dan Plews, nwoke ahụ zụrụ m na Challenge Roth, na-eme ọzụzụ niile ya banyere rollers ma kwuo na ya anaghị eji ike ọgụgụ isi karịa ịnya n'èzí.
Na oge zuru oke, ị ga - eme ya, mana mgbe ịnwale ha nke izizi agaghị adị mma. Adịghị m mma. (mumbles) - Ooh, ka anyị pụọ. - Whoa. Na-esote, mmega ahụ na scooters dịtụ iche na onye na-enye ọzụzụ.
Ọ bụ ezie na ị nwere ike ịme ihe dị egwu na onye na-enye ọzụzụ, ị nwere ike ịpụ na sadulu, ị nwere ike ịgba ọsọ, ị nwere ike, anaghị m eme nke ahụ na rollers. A, n'ihi na sprinting siri ike, ọ bụ onye a na-achịkwaghị achịkwa, ọ ga-akwụsị ịnyagharị igwe kwụ otu ebe na ị nwere ike ịpụ na rollers, na B, ndị a bụ ndị Elite Nero scooters nke edepụtara na 830 max watts. Ezubere ndị nkuzi a dị elu, dị ka Wahoo KICKR, Tacx, na CycleOps Hammer, emebere maka 2000 watts, yabụ naanị obere watt g, na ihe m chọpụtara bụ na mgbe ihe dị ka 250 watts nke a abụghị n'ezie maka achọrọ ịnọ ogologo oge.
Yabụ mgbe m nwere ike ịgba ọsọ ma nwee ike n'azụ ha maka sekọnd ole na ole, ọ chọghị ịnọ ebe ahụ, ọ gaghị ekwe ka m kpochapụ VO2 max dị elu dị elu. Na isi njedebe, ọ chọghị ịdalata na nke ahụ dị mfe jụụ ma, n'ihi na echere m na ike nke wiil ndị ahụ n'onwe ha na-egbochi gị ịme ya ọfụma. Ya mere, ebe dị ụtọ dị n'etiti 130 watts na 250 watts.
Ebe dị ụtọ ebe a dị n’agbata 50 watts na 2000 watts. Ahụtụbeghị m ebe ihe a mere ka ọ kwụsie ike n'ụzọ ụfọdụ, ọzụzụ na rollers ga-eme ka uche gị sie ike karị. Yabụ, ọ bụrụ na ị na-alụ ọgụ na mgbado anya, ọ bụrụ na ịchọta na uche gị na-awagharị, ma ọ bụ na ị na-ekwu okwu onwe gị na-adịghị mma n'oge agbụrụ ma ọ bụ ogologo oge, nke a nwere ike inyere gị aka n'ihi na ọ bụ naanị ịkwọ ụgbọala na-akpali gị ikwubi dị ka m mere na Zwift Tri Academy, ọtụtụ ndị na-eme egwuregwu kwuru na ha nwere mmasị ịbanye na ọnọdụ erg na Wahoo KICKR na Zwift ma na-achọpụta, na ihe Dan Plew kwuru ọzọ banyere ihe kpatara na ọ na-eme ọzụzụ niile ya na ndị na-agba ọsọ na ọ na-agbakwunye otu akụkụ nke elekwasị anya nke ahụ bụ ihe dị ezigbo mkpa mgbe ị banyere n’ọsọ.
Chọghị ụbụrụ isi ike. Na mgbakwunye, mgbe ị na-agba ọsọ, ike gwụrụ gị na mberede, nke na-eji ike dị ukwuu. Ọ bụrụ n’ịzụzị akwara uche ndị ahụ n’ihe dịka ịtagharị mgbe ị banyere n’ọsọ ahụ, ọ ga-emecha dị gị ka oge dị mkpirikpi ma ị ga-enwe ike itinye uche na ọrụ ahụ.
Na-esote, ngwa ngwa, ọ bụrụ na ị na-enwekarị ọnya na sadulu, ị ga-enweta ọnya ọnya na onye na-enye ọzụzụ, nke ahụ bụ ihe nkịtị. n'ihi na onye na-enye ọzụzụ na-adịgide adịgide edobere sadulu ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ebe ahụ na ikekwe nkeji iri na ise na ọkara nke anụ ọhịa. Mana ọ bụ naanị ị nọ ọdụ ọdụ otu abụọ na anọ.
Na nke a enwetaghị m akwa ime ọwụwa ma ọlị n'ihi na enwere ụdị mmegharị ahụ oge niile, dị ka mgbe ị nọ n'okporo ụzọ, wepụ ụfọdụ nrụgide n'akụkụ nke ime ahụ gị, nke m nwere ekele maka ya. Ma ihe ikpeazụ ị ga-eburu n’uche bụ gịnị ka ị na-eji onye na-enye ọzụzụ eme? Ọ bụrụ n ’ịchọrọ mgbatị ahụ dị oke mkpa? Have ga-enwerịrị ụfọdụ KPI, ụfọdụ cadences, ịchọrọ ịgbagharị, ịkwesịrị ịpụ na oche ahụ, ịkwesịrị ịrụ ọtụtụ ọrụ guzo, ịchọrọ ezigbo ike, ọ ga-abụ onye na-enye gị ọzụzụ. Ọ bụrụ na ị na-achọ ihe ga - abụ njem ntụrụndụ, ogologo oge, njem na - aga n'ihu, dị mkpụmkpụ, na - agbagharị agbagọ ike ebe ike dị ntakịrị ntakịrị, ike nwere ike ịdị ntakịrị ntakịrị, nke a ga - abụ n'ezie ahụmahụ dị mma, ma ọ bụ ọ bụrụ na ịchọrọ ịnọ n'ihu TV, gbanye TV ma pụọ, ọ ga-abụ ahụmịhe mara mma n'ezie.
Ọ bụrụ n ’inwe naanị ego maka naanị otu onye na-enye ọzụzụ, enwere m ike ịsị nweta onye na-enye gị ọzụzụ maka na ị nwere ike ime karịa. N'ime ọnọdụ mara mma, ị nwere ike ịchọrọ inwe abụọ. Nke a bụ maka ọrụ gị a kapịrị ọnụ, nke a maka ịnyagharị egwuregwu gị, nke a maka oge ezumike gị, maka oge ntọala ụlọ gị ebe ọ dị ntakịrị ntakịrị na ahụ yana akụkụ ahụ na-amanye gị ịzụlite isi dị mma, nke siri ike igwe kwụ otu ebe na-achịkwa isi, nke a bụkwa ngwaọrụ ọzụzụ, dị ka nke ahụ.
Onwe m, m ga-alaghachi na ya naanị n'ihi na m dị ka a ga - asị na m nwere onye nchịkwa na - adịgide adịgide ebe a, ọ ga - adịkwa. Nke ahụ apụtaghị na enweghị m mmasị na nke a. Ndị a bụ n'ezie ndị na-eme mkparịta ụka Elite Nero Interactive na-ekwukọrịta na Zwift gị, mmemme ị na-ahazi tupu oge eruo, onye na-enye gị ọzụzụ, ihe ọ bụla ma ọ bụrụ na ịchọrọ ọrụ dị ka mmekọrịta nke Zwift na ndị ọrụ ọzụzụ mmekọrịta niile, nke a bụ ụzọ isi mee nke a n'oge gara aga agaghị ekwe omume na ọrụ.
Maka ọrụ, enwere m ike iji ya tụnyere naanị otu. Ma enwere m mmasị na ya, usoro mmụta ahụ dị mfe n'ihi na enwere obere egbugbere ọnụ na nsọtụ wiil ahụ nke ga-egbutu ebe ahụ, obere egbugbere ọnụ na nsọtụ rollers na-eme ka igwe kwụ otu ebe ghara ịda, yabụ usoro mmụta ahụ dị mma karịa mana enwere nsogbu ndị a nke enweghị ike iru ezigbo ike ma ọ bụ dị ala n'ezie. Na mkpokọta, ekele maka izipu ndị isi a, amụtara m ọtụtụ ihe banyere rollers.
tour de france ogbo 11 nsonaazụ
Nke ahụ dị ezigbo mma ma na-agagharị, nke ọma na anyị na-enweta oge oyi n'oge na-adịghị anya, nke ahụ pụtara oge ọzụzụ, oge Zwift na-abịa ka a nwee ọtụtụ ọdịnaya na nke ahụ, hụ na ị kụrụ bọtịnụ ịkwụ ụgwọ n'okpuru.
Ridnya igwe na-esiri anyị ike?
Onye ọ bụla maara nke ịnya narollersga-agwa gị aeziezigbo pedaling Usoro bu isi. N'ihi nke arollersdịukwuiji meziwanye usoro ịkwado gị. Na-agba ịnyịnyarollersna-akụziri gị itinye ike gị na pedals n'ụzọ dị larịị ma rụọ ọrụ nke ọma.10.02.2017
Ogologo oge ole ka m kwesịrị ịgba ịnyịnya?
Ime ya dị mfe, ịme ya nke ọma bụsiri ike.Ndagharịamanye gị pedal zuru okirikiri mgbe niile. Ọ bụ ngwa ọrụ zuru oke iji pịldị zuru oke mana ọ na-ewe oge na mbọ. Ọ bụghị mbọ ụkwụ pedal nke ọma, nke ahụ bụ n'efu, ọ na-ewe oge iji nweta yarollerspụta na itinye aka na ime ya.
Olee otú ị na-amalite na-agba ịnyịnya rollers?
Nkeji 0–10: Bido itughari n’ihe di mfe n’ime 90-100rpm na, ihe kariri nkeji iri, mee ka gia bulie elu. Nkeji 10-15: Gaanụ n’ihu n’iwu ụlọ ahụ (100-110rpm) ma jiri nwayọ rụọ ọrụ site na ntugharị ka ọ were nkeji iri na ise ị nọna-agba ịnyịnyana mgbalị oge.26.10.2017
Ndị rollers ha adịghị mma maka taya?
Meerollersmebie igwe kwụ otu ebe mtaya?Ndagharịagaghị eme ka igwe kwụ otu ebe gịtayana-eyi dị ka ihe iji tụnyere onye na-enye ọzụzụ. N'eziokwu, ha abụọtayaga-enwe na kọntaktị naalamkpọ, ma ha bụ nke ezigbo aluminom ma ọ bụ plastic na-agaghị n'ezie na-etinye ukwuu nsogbu na gịtaya.
Ndị rollers dị jụụ karịa ndị na-azụ ọzụzụ?
Ndagharịga - enyere aka meziwanye usoro gị, nguzozi na pedal stroke ka ha na - akuziri gị ịgbago nke ọma. Ha na-enwe mmetụta nke ukwuu dị ka ịnya n'okporo ụzọ ma n'ozuzu ha ka ukwuuwere dị jụụ karịato turboonye ọzụzụ.Ọnwa Ise 14, 2014
Ogologo oge ole ka ị kwesịrị ịnọ na onye na-azụ igwe kwụ otu ebe?
Ọkarị nkeji 45ka2.5 awa dabere na nzube na ike nke mgbatị ahụ.Jenụwarị 10 2012 r.
Ogologo oge ole ka ọ na-ewe iji mụta otu esi agba ịnyịnya ígwè?
Ná nkezi yakwesiri iweregburugburu 5-7 sessions. Nke pụtara, oge 5-7 iji nwee ike ịhazi, agbanyeghị, enwere ike ihe ndị ekwesiri iburu n'uche. Ikwesiri ịma usoro dị mma, nweta usoro ziri ezi ma chọọ onye ga-enyere gị aka.
Nwere ike ịkwụsị ịgba ọsọ na rollers?
Chọrọ ịma ihe na-eme mgbegịgbapuo n'akụkụ nkerollers? Ọfọn,ọ bụrụ na ị kwụsị pedaling, mgbe gịwiil ga-akwụsịagbaghari naị nwere iketinye ụkwụ gị n’ala.Ọ bụrụ na ị na-pedaling, mgbe ahụ nzọ niile apụla.07.05.2014
Nwere ike ịnya ịnyịnya ígwè n'elu ugwu na rollers?
Can nwere ike ịgba ịnyịnyaọ bụla wheel size narollers. Roadzọ,MTB, abụbaigwe kwụ otu ebe(ọ gaghị abụ oge mbụ), site na axle, ntọhapụ ngwa ngwa - naanị ịtọlite ​​nanọkwasi. Naanị ịpịa ala ma tie n'okporo ụzọ. N'akụkụ aka nke ọzọ,rollersn'ogige atụrụ ma na-echekwa omume ọma n'okpuru akwa, mahanwere ike ghara ịdị mfe ịbanye n'ụgbọ gị.
Gịnị nwere ike ime rollers maka ịnya ụgbọ gị?
Nke mbu, rollers na-eme ka nguzozi gi na ikike ijikwa igwe gi ka mma. Ọ bụrụ na ị na-alụ ọgụ n'okporo ụzọ nwere isi ihe dịka ijide ụzọ kwụ ọtọ mgbe ị ga-esi na karama pụta n'ime olulu ya, igwupụta ogwe ike site na akpa uwe gị ma ọ bụ wepụ jaket, mgbe ahụ ị nwere ike ịnweta uru site na nguzozi na isi nkwụsi ike ọzụzụ na rollers anapụta.
Ebee ka ndị rollers na-aga igwe kwụ otu ebe?
A na-eji igwe kwụ otu ebe eme ihe ugboro atọ, ma ọ bụ rollers, abụọ n'ime ha na-anọdụ ala n'okpuru wiil azụ na otu n'okpuru ụkwụ ihu. N’adịghị ka ndị na-enye ọzụzụ igwe kwụ otu ebe, ngalaba a anaghị etinye n’igwe ahụ, na-achọ ka onye na-agba ya dozie igwe kwụ otu ebe ka ha na-agba.
Gịnị ka m ga-eyi mgbe m Gbaa ịnyịnya rollers?
Ndị na-agba novice nwere ike chọọ iyi ndị na-azụ ọzụzụ, karịa ịkpụkọ akpụkpọ ụkwụ, ma tulee ịkpu okpu agha ruo mgbe ha nwere ike ịmalite, kwụsị ma jiri obi ike na-agba ịnyịnya. Gbaa mbọ hụ na igwe kwụ otu ebe dị na nha nha nke ọma iji gbagoo.